Momba anay - Shanghai Yangli Furniture Material Co., Ltd.
Ho tsapanao avy hatrany ny serivisinay matihanina sy mihaino.
Manaraka ny filozofia momba ny tsy fivadihana sy ny fitondrana olona mitovy, ny GERISS dia manolo-tena hanome ny mpanjifa serivisy faran'izay tsara kalitao.
Miarahaba anao izahay hitsidika ny orinasanay, ny orinasanay ary ny efitrano fampirantiana mampiseho vokatra isan-karazany izay mifanaraka amin'ny antenainao.
Raha manana ny takiana amin'ny vokatrao izahay dia mifandraisa aminay izao. Manantena ny hihaino anao tsy ho ela izahay.
Ny orinasanay SHANGHAI YANGLI FURNITURE MATERIAL CO., LTD natsangana tamin'ny taona 1999, dia mifantoka amin'ny fampivoarana sy ny famokarana fitaovana enti-miasa amin'ny fanaka. Amin'izao fotoana izao izahay dia miasa ivon-toerana R&D roa sy ny toby famokarana zavakanto any Shanghai sy Foshan, faritanin'i Guangdong. Ny vokatray dia amidy amina marika telo malaza be:YANGLI, GERISS, HIFEEL. Izy ireo dia Drawer System, sary miafina, sary mihetsika Ball, Slide amin'ny latabatra, bisikileta nafenina, tanany, vazaha vita amin'ny lafaoro ary kojakojam-pitaovana fanaka hafa, izay ampiasaina amin'ny fanaka, lalimoara, fitaovana ao an-trano ary finday. Ny vokatray dia nahazo laza teo amin'ireo firenena 40 mihoatra an'izao tontolo izao.
Ny filozofianay momba ny asa aman-draharaha dia mifototra amin'ny fitsipiky ny "Round Sky and Square Earth, Striving and Studying", fomba fiteny nentin-drazana sinoa. Ny mpiasanay dia nandova sy niaina tamin'ity fitsipika ity fa tsy misy na inona na inona azo tanterahina raha tsy misy fenitra na fenitra, ary ny orinasantsika dia tokony hanaraka ny lalàna sy ny fitsipika amin'ny fanaontsika isan'andro. Mamporisika mafy ny fanatsarana sy ny fampandrosoana hatrany ny vokatray sy ny fizotrantsika miaraka amin'ny fanamafisana ny etikan'ny orinasa.
Taorian'ny fiezahana rehetra natao tamin'ny alàlan'ny fanaka fanaka, ao anatin'izany ny kisarisarin-tsarimihetsika, savily vita amin'ny fatana, fametahana lafaoro, tahony ary fittings hafa, dia nahazo laza malaza teo amin'ireo kabinetra amerikana, fanaka mafonja, fitaovana ao an-trano ary saha hafa izahay.